Vilany misy zaridaina sy ny akany - iza no tsara indrindra?
Ny fandaharana ny saha dia tokony atao amim-pitandremana tanteraka. Na izany aza, na dia tsy manana zaridaina lehibe eo am-pelatanany aza ny mpampiasa, fa zaridaina kely ihany, na eny amin'ny fantsom-baravarana na terrace aza dia afaka mamorona salan-jiro maitso ihany koa. Ho fototry ny fototr'izany vilany an-jaridainany safidy izay lehibe.
Iza amin'ireo vilany tokony hofidin'ny zaridaina ka manadihady ny fitaovana na ny habeny?
Hitanisa ity pejy ity Ny maritrano kely tanàna
Ny karazana vilany misy zaridaina
Misy valan-javaboary maro isan-karazany. Samy hafa ny endrika sy ny habeny ary ny fitaovana, noho izany dia miankina amin'ny hevitry ny fandaminana habaka fotsiny. Raha zaraina amin'ny volan-dry zareo ny vilany, ireto manaraka ireto dia raisina ho fantatra:
Solika hazo - araka ny fantatra, dia hazo no akora voajanahary, isaorana izay ny vilany vita amin'ny hazo dia hifanaraka amin'ny zaridaina na terrace tsy misy anisany. Rehefa dinihina tokoa, izy io koa mahaliana sy versatility mahaliana. Izany no mahatonga ny vilan'ny hazo vita amin'ny zaridaina hameno tsara ny habaka amin'ny lapoaly vita amin'ny hazo, rattan na tekno-rattan sy fehin-tanana, ary koa hiditra ao anaty toerana tsy dia mahazatra loatra.
Voninkazo mivaingana - valan-javamaniry betonika matetika dia ampiasaina amin'ny sehatry ny daholobe. Na izany aza, azo apetraka ao amin'ny zaridaina an-trano, balconies na terraces ihany koa. Ny tena zava-dehibe, avy amin'ny fomba fijery momba ny fampiasana, mavesatra ny vilany mivaingana mivaingana, koa amin'ny lafiny iray tsy mahatohitra amin'ny fikosehana rivotra, ary amin'ny lafiny iray, sarotra ery. Raha kely toerana kely ireo dia mety ho kivy amin'ny endriny. Avy eo dia mendrika ny fampiasam-bola amin'ny vilany zaridaina mivaingana misy endrika noforonina, na ny vilany izay manahaka ny beton-tsangana fotsiny.
Tavo plastika plastika
Tavo plastika plastika - ity karazana vilany ity dia asongadin'ny vidiny ambany. Ankoatra izany, vokatra be dia be izy io (anisan'izany ny vilan'ny tanimbary plastika lehibe sy kely, vilany misy zaridaina ambany sy avo, vilany maoderina sy mahazatra. Matetika izy ireo dia maivana ary mora entina. Amin'ny lafiny iray, mora levon'ny rivotra mahery izy ireo, noho izany - indrindra ny vilany plastika lehibe - mendrika lanja fanampiny. Ny lavaka iray ao ambanin'ny vilany plastika dia ilaina ihany koa, izay hiantohana tsara ny fitrandrahana tsara ny zavamaniry ao anatiny.
Sobika tanimbary - tsy isalasalana, ny vilany misy zaridaina seramika (lehibe sy kely) dia iray amin'ireo vilany be mpampiasa matetika, satria izy ireo dia karazana karazana fandaharana mahaliana. Mora mifindra izy ireo ary tsy vitan'izany fa mahatohitra ny toetrandro izy ireo. Ny tena zava-dehibe dia eo amin'ny resaka fikarakarana ny zavamaniry no iantohan'izy ireo ny mivezivezy amin'ny rivotra. Mampalahelo fa tsy vitan'ny matevina sy mora vaky, toy ny mihetsika na mitondra ny valan-javamaniry seramika.
Vilany feno tanimbary
Vilany feno tanimbary - kanto tena kanto ary miavaka manokana, nefa vilany be saha, lafo vidy, izay matetika ampiasaina amin'ny toerana ho an'ny besinimaro (e.g. amin'ny fasana). Ny fitaovana ho an'ny vilany vato dia mety ho granita na marbra.
Tanimanga vy - Ny vilany vy dia matetika vokatra kely, matetika mampiasa aluminium na vy galvanized, izay miaro azy amin'ny korosi. Ankoatr'izay, ireo valan-javamaniry azo tantely azo avela izay avela ivelan'ny manodidina ny taona. Tokony ho raisina ho toy ny vilan-tany maoderina ireo.
Technorattan na vilany rattan
Technorattan na vilany rattan - vilany voninkazo tsara tarehy ho an'ny fananganana zaridaina, baleska, terrace ary gazebos amin'ny fomba maoderina. Izy ireo dia manolotra fisafidianana marobe momba ny endrika sy ny habe izay mety ho rakotra ho an'ny vilany mety an'ny fitaovana hafa. Ny tsy fitovian'ny rattan sy ny poly rattan dia, ankoatra ny zavatra hafa, ny fanoherana ny hamandoana sy ny tara-masoandro. Mazava ho azy fa tsara tarehy kokoa ny poly rattan amin'ity lafiny ity.
Jereo ihany koa: Lafin-javaboary, tanàna ary zaridaina
Na mety vilany misy tanàna ve?
Ny safidy ny vilany ho an'ny zaridaina dia lehibe, indrindra amin'ny zaridaina sasany azonao atao tany am-boalohany, iray amin'ny karazany iray vilany tanàna. Amin'ity tranga ity dia mazàna vilany mazàna na farafara farafaharatsiny farafahakeliny izy ireo, noho izany dia hiasa tsara amin'ny sehatra lehibe kokoa, na dia tsy fitsipika aza izany. Ny vilany voninkazo voalamina tsara dia azo antoka fa hanatsara ny zaridaina ary hanome loko azy.
Amin'ny maha-fitsipika dia endrika nentin-drazana minimalist, fisaorana izay hifanentana tanteraka amin'ny fandaharana ny zaridaina, indrindra amin'ny fomba maoderina. Ny tena marina, amin'ny lafiny iray, izy ireo dia vilany haingon-trano, etsy ankilany, azo ampiharina amin'ny fiasa fanampiny:
vilany voninkazo mamelatra.
Amin'izany fomba izany, mitambatra aesthetika izy ireo miaraka amin'ny fiasa azo ampiharina. Ny vilany dia toerana ho an'ny voninkazo, kirihitra na hazo kely, ary koa latabatra, seza, na aorian'ny hariva dia hanamarika ny lalan'ny fifandraisana eo amin'ny zaridaina.
Hitanisa ity pejy ity Ireo fako an-dàlana maoderina dia singa amin'ny singa maritrano amin'ny tanàn-dehibe
Iza ireo vilany misy saha?
Koa hita mazava tsara fa misy isafidianana be dia be ny zaridaina zaridaina eny an-tsena, ka ny tsirairay dia tokony hahita zavatra mety ho an'ny zaridainany, balkona na terebany. Miankina amin'ny fandaharana ny habaka, ohatra amin'ny fomba nentim-paharazana, maoderina na avant-garde. Ny sasany dia hifidy voho hazo, ny hafa kosa dia hifidy ny vilany vy na vato. Vina kely ho an'ny lavarangana ny vilany kely, fa mety kosa ny valan-javamaniry lehibe ho an'ny faritany lehibe kokoa. Aza adino ihany koa ny vilany tsirairay dia azo atao voaravaka an-kalalahana, ohatra ny asan'ny tanana, ny famoronana ary ny sary hosodoko.
Ho an'ny maro, ny vidiny dia azo antoka ihany koa ny fahazoana mifantina. Tsy midika anefa izany fa tokony handeha amin'ny vilany zaridaina mora ianao. Varotra (ohatra Famolavolana tanàna) dia fotoana tsara hividianana vilany tsara vita amin'ny fitaovana avo lenta amin'ny vidiny mahavariana. Amin'izay dia afaka mamonjy be ianao, amin'ny fividianana mora vilany an-jaridaina vita amin'ny beton, ary na ny vilany vato manokana.
Ny fitsipi-pifidianana iray hafa dia ireo zavamaniry tadiavin'ny mpampiasa azy amin'ny toerana maitso ao amin'ny zaridainany, terasany na lavarangana. Tsy voatery ho toy ny vilany saha lehibe fotsiny izy ireo. kelikely kokoa, Ny vilany mihantona dia mety hiasa tsara amin'ny zavamaniry sy fikomiana miakatra. Amin'ny bitika lehibe kokoa eny, na hazo sedera sy hazo rantsaha aza dia mambolyary amin'ny vilany isan-karazany Herbs.
Hitanisa ity pejy ity Lahatsoratra vita amin'ny fefy
5 / 5 ( 17 vato )
vilany zaridaina betonikavilany zaridaina betonikavilany hazovilany tanànampanamboatra tanànavilany an-jaridainavilany zaridaina betonikavilany be seramikavilany be seramika lehibevilany hazovilany lehibe lehibevilany be vatoTanimanga vyvilan-tany zaridaina miolakolakavilany maoderinavilan'ny tanimbo plastikavilan'ny tanimbary plastika lehibesaha varotra zaridainavilany zaridaina betonikaVilany masakaTavoahangy teknorattanvilany hazovilany lehibe lehibevilany voninkazo manokanavilany maoderinavilany feno zaridaina